Kenya oo sheegtay in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo sheegtay in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab
Laba dabley ah ayaa lagu dilay aagga Wajeer, Booliska Kenya, ayaana sheegay in ay ahaayeen Al-Shabaab, ka soo gudubtay xudduudka Soomaaliya.
WAJEER, Kenya - Labo nin oo lala xiriirinayo in ay ka tirsanayeen kooxda Al-Shabaab ayaa lagu toogtay degaan hoostaga magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi-bari Kenya.
Sida ay boolisku sheegeen kolonyada howlgalka fulisay ayaa gaaf-wareegysay aagga Dabadarer oo ka tirsan gobolka Habaswen markii ay la kulmeen dableyda, taasoo dhalisay is-rasaaseyn.
Wargeysaka The Star oo ka soo baxa gudaha Kenya oo soo xiganaya saraakiisha booliska ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen afar qori oo AK47 ah, kaddib markii ay la soo afjaray kooxda lala xariirinayo Al-Shabaab.
Rono Bunei oo ah taliyaha boolsika gobolka Waqooyi bari ayaa tilmaamay inay kordhiyeen howlgallada ay ku baadi-goobayaan xubnaha ka tirsan al-Shabaab, si looga hortago weerarrada ay ka geystaan gobolka Waqooyi-bari.
Degaannada xudduuda Soomaaliya u dhow ee ay ka mid yihiin Mandheera, Wajeer, Garissa iyo Lamu, ayaa si joogto ah u wajaha weerarrada Kooxda Al-Shabaab, ku dhawaan 10 qof ayay degaannadas ku dileen kooxda xiriirka la leh Al-qaacida bishaan Agoosto.
Bishii June, ee sanadkaan ayay ahayd markii maamulka degmada Mandheera lagu qasbay inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa gaadiidkooda iyo safarrada dhanka dhulka, kadib markii ay kordheen dhacdooyinka la xiriira argagaxisada ee aaggaas.
Kenya, waxa ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadeedu ku jiraan howl-galka nabad-ilaalinta Soomaaliya, (AMISOM), waxaana dhawaan si buuxda loo soo celiyay xiriirka diblumaasiyadeed ee labada dal.